Motorola One Power: Sawirro qarsoon iyo qeexitaankiisa | Androidsis
Maalmo ka hor waxaan haynay xog ku saabsan Motorola One Power markii ugu horeysay, oo u muuqata inuu yahay taleefankii ugu horreeyay ee Motorola ee u adeegsada Android One nidaam hawlgal. Waxaan horeyba u helnay xogtii ugu horreysay ee qaabkan, oo bandhiggeeda lagu xanto inay tahay 6-da Juun. Laakiin waxay umuuqataa in xogahaasi aysan ku ekaan halkan.
Maxaa yeelay waxay ahayd wiiggan dhammaadkiisii markii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Motorola One Power ay yimaadaan. Xaaladdan oo kale waxay ku yimaadaan qaab muuqaal ah, oo aan ku arki karno taleefanka dhabta ah, marka lagu daro qaar ka mid ah qeexitaannada cusub ee moodeelka. Maxaan filan karnaa?
Marka la eego qeexitaannada, waxaa la filayaa in Motorola One Power uu yeelan doono a shaashad leh FullHD + qaraarka, kaas oo sidoo kale yeelan doona saamiga 18: 9. Marka calaamaddu waxay ku sii socotaa isbeddelka looxyada khafiifka ah, taas oo horeyba u ahayd waxa ugu caansan adduunka maanta suuqa.
Qalabka dhexdiisa Waxaan fileynaa processor Qualcomm Snapdragon 636, taas oo si cad u caddaynaysa inay noqonayso moodal gaadhaya badhtamaha heer soo saaraha. La soco processor-ka, waxaan fileynaa 6 GB RAM iyo 64 GB kaydinta gudaha ah.
Motorola One Power wuxuu lahaan lahaa kamarad gadaal laba-gees ah. Dareemaha ugu muhiimsan waa 16 MP oo leh furitaanka f / 1.8, halka midka labaadna yahay 5 MP oo leh aperture f / 2.0. Intaa waxaa dheer, kamarad 16 MP ah oo leh f / 1.9 aperture ayaa nagu sugeysa xagga hore. Haddii kale, qalabku wuxuu lahaan lahaa a 3.780 mAh baytariga, kaasoo ballan qaadaya inuu siinayo madax-bannaanid badan.
Guud ahaan waad arki kartaa taas Motorola One Power wuxuu gaarayaa heerka dhexe ama heerka dhexe. Qayb aad u tartameysa suuqa. In kasta oo haysashada Android One ay ka caawin karto inay xoogaa caan ka noqoto dadka isticmaala. Haddii wax walboo hagaagaan, waxay u badan tahay in toddobaadkan si rasmi ah loo soo bandhigi doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Sawirro cusub iyo qeexitaanno gaar ah oo xaday Motorola One Power